Kwete COVID-19 mapasipoti, hapana zveKisimusi zvakavharirwa Great Britain
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kwete COVID-19 mapasipoti, hapana zveKisimusi zvakavharirwa Great Britain
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mumwe murume akaputirwa mureza weDanish akamira paAmalienborg Palace Square, pakaimbwa nevanhu kuratidza kusvitsa makore makumi masere ekuberekwa kweMambokadzi weDanish Margrethe II, muCopenhagen, musi waApril 80, 16. - Vanhu mudunhu rese vanogona kuimba pamwe chete nemabalkoni, nepamawindo , mumagadheni kana kubasa. Mhemberero yemakore makumi masere ekuberekwa kwaMambokadzi Margrethe yakamiswa nekuda kwe COVID-2020, kutya hutachiona hwecoronavirus. (Mufananidzo naNiels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Mufananidzo naNIELS CHRISTIAN VILMANN / Ritzau Scanpix / AFP kuburikidza neGetty Mifananidzo)
Gurukota rezvehutano reBritish Sajid Javid akaudza mutariri weBBC, Nick Robinson kuti mushure mekuwongorora nezvenyaya iyi, hurumende yanga isingatarisire kukanganisika mukati menguva yezororo - kusiyana negore rapfuura apo mhuri dzekuUK dzakaudzwa kuti dzigare dzakaparadzana pamazororo. uye fembera zvirinani.
Gurukota reUK rinosheedzera kuti hapana COVID-19 pasipoti yeBrits.
Mazororo eKisimusi haafungidzike muUK, gurukota rinodaro.
66% yevagari vekuUK vakabaiwa zvakakwana nazvino.
Panguva yekuonekwa kwanezuro pachiratidziro cheBBC, Gurukota rezvehutano reUK Sajid Javid akataura kuti hurumende yeBritain yaisazounza mapasipoti eCOVID-19 uye kuti Brits "ichawana Kisimusi" gore rino.
Gurukota rezvehutano Javid akaudza mutariri weBBC, Nick Robinson kuti mushure mekuwongorora nezvenyaya iyi, hurumende yanga isingatarisire kukanganisika mukati menguva yezororo - kusiyana negore rapfuura apo mhuri dzekuUK dzakaudzwa kuti dzigare dzakaparadzana pamazororo nekupembera. chaizvo.
Javid akazivisa kuti "aisatarisira kumisidzana" panguva yekuvhuvhu uye nguva yechando, achiti haakwanise "kuona kuti tinosvika sei pane kumwe kuvhara." Gurukota rakawedzera, zvisinei, kuti "zvingave zvisina basa kune chero gurukota rezvehutano pasi rose kubvisa zvese patafura."
British Gurukota rehutano Javid akazivisawo kuti hurumende ichange ichirasa hurongwa hwayo hwekuunza mudzimba COVID-19 pasipoti yekudzivirira, zvirinani kwenguva iripo.
"Isu hatifanire kunge tichiita zvinhu nekuda kwayo kana nekuti vamwe vari kuzviita," akadaro Javid, achiona kuti "vanhu vazhinji havatombodi zano" rekuratidzira mapepa ekuita mabasa ezuva nezuva.
"Chandinogona kutaura ndechekuti takanyatsozvitarisa, uye tichifanira kuzvichengeta sechisarudzo, ndinofara kutaura kuti hatisi kuzoenderera mberi nezvirongwa zvepasipoti," akadaro. .
Mushure mekunge mutariri weBBC aratidza kuti makurukota akati wandei - kusanganisira gurukota redziviriro re COVID-19, Nadhim Zahawi - akange ataura mazuva mashoma apfuura kuti mapasipoti ekudzivirira aizoitwa munguva pfupi iri kutevera uye kuti ndicho chinhu chakakodzera kuita, Javid akaramba zano rekuti U-kutendeuka kwaitika mukupindura kupandukira, kupesana-kurambidza Conservative Party backbencher MP.
"Nyika zhinji panguva yavakaita zvaive zvekuyedza kuwedzera majekiseni avo ekudzivirira uye unogona kunzwisisa kuti sei vangadaro vakadaro," akatsanangura Javid. "Takabudirira zvikuru nemitero yedu yekudzivirira kusvika pari zvino."
Kune vanhu zviuru makumi mana nematatu makumi masere nevatanhatu muUK vakabaiwa jekiseni rakanangana neCOVID-43.89, nepo mamirioni makumi mana nemasere akagamuchira mukana mumwe chete, maererano nehuwandu hwehurumende.
Sekureva kwedatha yazvino, 66% yeUK yakabaiwa zvakakwana, zvichiita kuti ive nyika yechigumi nenomwe yakabaiwa zvakanyanya.